Cuncunka Xubnaha Taranka Sababaha & Daawada
Daweynta dabiiciga ee kacsi la’aanta !!
4 talooyin oo lagu daahiyo biyo baxa degdega ah
Viber Borotiinnada laga helo cuntooyinka ay kamidka yihiin Hilibka cad sida Kalluunka iyo Digaagga iyo weliba Caanaha iyo Farmaajada cadi waxa ay sameeyaan hormoonno kordhiya kacsiga iyo rabitaanka ragga. Fitamiin A waxa uu kamid yahay waxyaabaha aan looga maarmin tamarsiinta habdhiska taranka ninka, isaga oo awood siiya qanjirka Borostaatka iyo Qooraha, kana qaybgala cusbooneysiinta unugyada dhinta iyo dardargelinta kuwa tabarta daran. Fitamiin A waxa uu ka buuxaa Karootada iyo khudaarta iyo furutada fareeshka ah inteeda badan.
Fitamiin B1 isagu waxa uu gacan ka geeystaa xoojinta qanjirrada taranka iyo firfircooneynta insiimada qabta shaqooyinka bayolojiyeed ee jirka.
Fitamiin D, waxaa loogu yeeraa Fitamiinka Jinsiga , maxaa yeelay waxa uu kamid yahay waxyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu daaweeyo madhalaysnimada. Wuxuu door weyn ka cayaaraa daryeelka tubbooyinka xawada ee ku jira xiniinyaha ragga, yaraantiisuna waxay kamid tahay waxyaabaha ugu badan ee ragga madhalaysnimada ku dhaliya.
Fitamiinka waxa laga helaa khudaarta caleenleyda ah iyo Firileyda sida Qamadiga. Cuntooyinka la caddeeyey waxtarkooda waxa ugu horreeya kuwa caloosha dhaqso ugu shiidma, jirkana degdeg uga baxa: — Kalluunka iyo Aragoostada:- Waxay kamid yihiin waxyaabaha Borotiinnada iyo Fitamiinnada laga helo kuwa ugu wanaagsan. Masaaridu ilaa iyo maantadaan la joogo qoyska cusub hilibka Shimbiraha uunbay uqooshaan habeenka aqalgalka.
Caalimkii la oran jiray Ibnu Siinaa waxa uu qoray in Xummusku kordhiyo ragannimada iyo rabitaanka jinsiga, sidaa daraadeed waxa calaf looga dhigi jiray Faraska labka ah iyo Ratiga kolka la rabo inay dheddigooda abaahiyaan.
Dad badan ayaa qaba xanuunka kelyaha ee daba-dheeraada loona yaqaan Chronic kidney disease dadkaasi ma gartaan bilowga ,sababtoo ah calaamadaha hore oo ah waxa aad u yar ayey ku qaadataa sanado inay ogaadaan. Ogaanshaha calaamadaha cudurada ku dhaca kelyaha ayaa kaa caawin kara inaad hesho daaweynta aad u baahan tahay iyo in aad dareento soo kabashadaada. Haddii adiga ama qof aad garanayso uu leeyahay mid ama ka badan calaamadahan soo socda ha welwelin marka hore is deji aad dhaqtar oo iska baadh dhiiga iyo kaadida.
Xusuusnow in badan oo calaamadaha ah waxaa keeni kara dhibaatooyin caafimaad oo kale. Adiga Sida kaliya ee aad u baahantahay ayaa ah in la ogaado sababta keentay calaamadaha marka waa qasab in aad aragto dhakhtarkaaga. Hadaba sidee isu badashaa? Xilliyada habeenkii waxaa ku soo toosisa kaadi adiga oo aan soo toosi jirin.
Kaadi xad-dhaaf ah oo ka badan xaddi weyn intii caadiga aheyd. Kaadida oo mar kale ka yaraata sida caadiga aheyd ama midabkeeda oo isbeddela.
Kaadida oo dhiig soo raaco dhammaadka ama bilowga In aad dareento kaadida oo ku gubta amma aad si xoog ah ku soo saarto In aad dareento in ay kaadi ku heyso oo aad xajin weyso dabadeed aad orod ku gashi Suuli dabadeed ay si baxsad ah kaaga timaado, markii aad soo dhameysato oo aad ka soo baxdo suuliga inta aadan ka fogaan hadana aad dareento in weli kaadidii ku heyso.
In ay ku dhibaan dhibcaha ugu danbeeya oo aad dareento xanuun mararka qaar aad u daran. Kelyaha waxey leeyihiin dheecaan dareeraha kaasoo dhisa jidhkaada laakiin marka kelyaha xumaadaan wuxuuna sababaa barar lugaha ah, kuraamaha, cagaha, wejiga, iyo cududada gacmaha. Symptom 3: Fatigue Calaamadda 3aad. Si fiican uma jiifsan kartid, xaqa sariirta ma gudan kartid ,shaqooyin badan kama qeyb qaadan kartid dhamaan waxey kugu keeni kartaa daal fara badan.
Dhadhanka waxaad dareemeysaa sida qof cabay cabitaanka ka sameysan IRON , waxaa kaa xidhmaya appetite ma garanayo wax lagu yidhaahdo af soomaali appetite waa qofka oo raashiinka qaadan la. Symptom 6: Nausea and Vomiting Calamaada sedexaad. Mataga Xaaladan waa marka ruuxa gaadho waxa loogu yeedhi severe wuxuu keenaa matag aan waqti laheyn wax walba uu ruuxaasi cuno kuma hakanayaan caloosha , sido kale wuxuu leeyahay -Lalabo yulaaalugo waxba ma cuni karo waxeyna ugu sii daran tahay marka uu ruuxa ugu darsan yahay cudur kale oo uu dawadiisana qaadanayo sabab wey is diidayaan.
Symptom 7: Shortness of Breath Calaamada 7aad neefta oo yaraata Dhibaato kaaga dhacda xagga neefta waxey la xidhiidhi kartaa kelyaha laba siyaabood tan koowaad dheecaanka dheeraadka ah ee jidhka oo ku bata ilaa wadnaha iyo tan labaad oo ah dhiig-yaraan. Oo sababi karta neefta oxygenta oo aad kuugu yaraata sida qof neef-qabatoobay oo kale Xilyada ugu badan ee la dareema waa xiliga jiifka oo ruuxaasi ma seexan karo wuxuuna saacado badan ku qaataa fadhi, marka aad shaqo heysidna wadnaha ayaa aad kuu garaacma dabadeed waad daaleysaa mana sii wadi kartid shaqada.
Cudurka polycystiskt ee kelyaha Okla wuxuu keenaa fiix waaweyn , dheecaan ka buuxsama kelyaha hadii aan dhaqso loo daweyn waxey keeni kartaa in beerka waxyeelo soo gaadho.
Fitamiin D, waxaa loogu yeeraa Fitamiinka Jinsigamaxaa yeelay waxa uu kamid yahay waxyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu daaweeyo madhalaysnimada. Wuxuu door weyn ka cayaaraa daryeelka tubbooyinka xawada ee ku jira xiniinyaha ragga, yaraantiisuna waxay kamid tahay waxyaabaha ugu badan ee ragga madhalaysnimada ku dhaliya.
Fitamiinka waxa laga helaa khudaarta caleenleyda ah iyo Firileyda sida Qamadiga. Cuntooyinka la caddeeyey waxtarkooda waxa ugu horreeya kuwa caloosha dhaqso ugu shiidma, jirkana degdeg uga baxa: — Kalluunka iyo Aragoostada:- Waxay kamid yihiin waxyaabaha Borotiinnada iyo Fitamiinnada laga helo kuwa ugu wanaagsan.
Masaaridu ilaa iyo maantadaan la joogo qoyska cusub hilibka Shimbiraha uunbay uqooshaan habeenka aqalgalka. Taasi micnaheedu maaha in laga gudbay caqabadihii la xidhiidhay xanuunnada kalyaha waxaana jira hab sahlan oo leysaga daweyn karo xanuunka marka ugu horreysa ee uu ku asiibo, laakiin aqoonta aynu u leennahay oo yar iyo xidhiidhka dhaqtar inoo gaar ah oo aynan laheyn waxey keeneen in ummad badani ka naafoobaan kelyaha. Dad badan ayaa qaba xanuunka kelyaha ee daba-dheeraada loona yaqaan Chronic kidney disease dadkaasi ma gartaan bilowga ,sababtoo ah calaamadaha hore oo ah waxa aad u yar ayey ku qaadataa sanado inay ogaadaan.
Ogaanshaha calaamadaha cudurada ku dhaca kelyaha ayaa kaa caawin kara inaad hesho daaweynta aad u baahan tahay iyo in aad dareento soo kabashadaada. Haddii adiga ama qof aad garanayso uu leeyahay mid ama ka badan calaamadahan soo socda ha welwelin marka hore is deji aad dhaqtar oo iska baadh dhiiga iyo kaadida. Xusuusnow in badan oo calaamadaha ah waxaa keeni kara dhibaatooyin caafimaad oo kale.
Adiga Sida kaliya ee aad u baahantahay ayaa ah in la ogaado sababta keentay calaamadaha marka waa qasab in aad aragto dhakhtarkaaga. Hadaba sidee isu badashaa? Xilliyada habeenkii waxaa ku soo toosisa kaadi adiga oo aan soo toosi jirin.
Kaadi xad-dhaaf ah oo ka badan xaddi weyn intii caadiga aheyd. Kaadida oo mar kale ka yaraata sida caadiga aheyd ama midabkeeda oo isbeddela. Kaadida oo dhiig soo raaco dhammaadka ama bilowga In aad dareento kaadida oo ku gubta amma aad si xoog ah ku soo saarto In aad dareento in ay kaadi ku heyso oo aad xajin weyso dabadeed aad orod ku gashi Suuli dabadeed ay si baxsad ah kaaga timaado, markii aad soo dhameysato oo aad ka soo baxdo suuliga inta aadan ka fogaan hadana aad dareento in weli kaadidii ku heyso.
Posted in Guska maxaa lagu daweeyaa
thoughts on “Guska maxaa lagu daweeyaa”
21.09.2021 at 22:15